Sidee Looga Ciiday Degmada Qardho ee Gobolka Karkaar – PuntlandNews24
Sidee Looga Ciiday Degmada Qardho ee Gobolka Karkaar
Kumaamkun qof oo ka mid ah shacabka degmadda Qardho ee gobolka Karkaar ee Puntland ayaa saaka u dareeray Masalo laga sameeyay duleedka Magaaladda, halkaasi oo ku oogay Salaadii ciidul- adxaa, islamarkaana ay ku dhagaysteen khudbado iyo wacdi ay soo jeediyeen culuma’udiinka iyo madaxda Puntland.
Wasiirka Maaliyadda Puntland Cabdiqadir Siciid Carshe, Duqa Degmadda Qardho Cabdi Siciid, Boqor Burhaan Boqor Muuse iyo masuuliyiin kale ayaa kala qaybgalay Salaad iyo dabaaldega maalinta ciida shacabka muslimiinta degmadda qardho oo si weyn isugu soo baxay.
Wasiirka Maaliyada C/qaadir Carshe oo dadweynaha kula hadlay masalihii Salaad ayaa ka codsaday in dowladda garab istaagaan, oo ay kala shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida dalka, gaar ahaan degaamadda gobolka Karkaar
Wuxuu sheegay in guddi heer gobol iyo heer degmo ay u xilsaari doonaan dhismaha iyo hagaajinta masalihii maanta salaada ciida lagu oogay . waxaana uu tilmaamay in Xarunta ay muhiim u tahay shacabka degmadda, isagoo ballanqaaday in dowladu qaybteeda ay bixinayso
Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa u duceeyay ummada muslimka ah meelkasta oo ay joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatooyin badani ay haystaan. Waxaa kaloo hadalo kooban oo masalaha ka jeediyay Duqa degmadda Qardho.
Shacabka oo isugu jiray dhalinyaro, waayeel iyo haween wata caruur si qurux badan loogu soo labisay ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaaladda Qardho, iyagoo isugu hambalyaynayay Munaasabadda Ciida, waxaana guud ahaa si weyn looga dareemay degmadda munaasabadda ciida.
Madaxweyne Ku-xigeenka Dawladda Puntland oo Salaadda Ciddul Adxaha La Tukadey Shacabka Caasimadda Garoowe